पूर्वराजा वीरेन्द्र नामको बि’यर स्वीजरल्याण्डमा बन्यो, के यो सम्मान कि अपमान होला त ? - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियपूर्वराजा वीरेन्द्र नामको बि’यर स्वीजरल्याण्डमा बन्यो, के यो सम्मान कि अपमान होला त ?
पूर्वराजा वीरेन्द्र नामको बि’यर स्वीजरल्याण्डमा बन्यो, के यो सम्मान कि अपमान होला त ?
पूर्वराजा वीरेन्द्र नामको बि’यर स्वीजरल्याण्डमा बन्यो, नेपालीका लोकप्रिय राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको नाम बाट ‘वीरेन्द्र बि’यर’ नामको ब्राण्ड बनाएर एउटा स्विजरल्याण्डको कम्पनीले बेचिरहेको छ।
धेरैले दिबंगत भएका राजाको अपमान भनि कमेन्ट गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। **थप जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्**